Aung Win Hein (Noble): 01/12/13
"ဘာဘွန်ကြက်သား(Bourbon Chicken) ဟင်းစပ်တစ်မျိုး..."
အမေရိကန်မှာ ရှိတဲ့လူဖြူတွေက အစပ်ကို ကြောက်ကြတယ်။
လူမည်းတွေက အစပ်ကို မကြိုက်သော်လည်း စမ်းသပ်စားကြတယ်။
ပဲစားလို့ခေါ်တဲ့ မက်စီကန်လူမျိုးတွေက အစပ်ကို ကြိုက်ကြတယ်။ စားကြတယ်။
အာရှသားတွေက လာတာနဲ့ လက်ညှိုးထိုးပြီး စားတဲ့ဟင်းစပ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
အပြင်က အေးရင် အတွင်းက ပူမှ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုတဲ့ကြော်ငြာနဲ့ရောင်းတဲ့အခါ
အဖြူရော၊ အမည်းတွေပါ စမ်းသပ်စားရင်း ကြိုက်နှစ်သက်သွားတဲ့ဟင်းစပ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်။
စားကြမယ်လေ ကောင်းကောင်း… စားကြမယ်လေ ကောင်းကောင်း…စားကြမယ်လေ
ဘာဘွန်အစပ်ကတော့ ဘာဘွန်လုပ်နည်းနဲ့အဆင့်အတော်များများမှာ တူညီပါတယ်။
နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ အစပ်ကို ရောစပ်လိုက်တဲ့နည်းပါ။
ဝယ်ကထဲကိုက အရိုးမပါတဲ့ကြက်ရဲ့ပေါင်သားကို အထူးမှာပြီး ဝယ်ရပါတယ်။
အဲဒီပေါင်သားတွေကို ပလတ်စတစ်ခွက်တွေထဲမှာ ကြက်သားပေါင်းရည် (Chicken mixed sauce)
တစ်မျိုးနဲ့ အနည်းဆုံး ၂၄-နာရီကြာအောင် စိမ်ထားရပါတယ်။
အဲဒီအရည်တွေ အသားထဲစိမ့်ဝင်တာမို့ ကြက်သားရဲ့အရသာဟာ အထူးကောင်းမွန်လာပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့မှာ အဲဒီစိမ်ထားတဲ့ကြက်သားတွေကိုသတ္တုဗန်းတစ်ခုထဲမှာ ဖြန့်ထည့်ပြီး
နာရီဝက်နီးပါးလောက် ပေါင်းရပါတယ်။ အဲဒီကြက်သားကနေ ကြက်ပေါင်းရည်တွေ ထွက်လာ
ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကြက်သားကလည်း မကျက်တကျက်ဖြစ်လာနေပါပြီ။
အဲဒီကြက်သားမကျက်တကျက်တွေကို Grill လို့ခေါ်တဲ့ Gas နဲ့အပူပေးထားတဲ့သံတန်းတွေ
ကင်တဲ့အချိန်မှာ ကြက်သားရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်ကို ( Bourbon Chicken Sauce )
(အဲဒီအရည်ထဲကို ထောင်းပြီးသား ဂျင်းကိုထည့်လိုက်ရင်
ဒီလိုကင်တဲ့အချိန်မှာ သုတ်လိမ်းရခြင်းအကြောင်းကတော့ ကြက်သားအရောင်လှလာအောင်နဲ့
အဲဒီအချိန်မှာ ကြက်သားရဲ့အနံ့က မွှေးကြိုင်လာပါပြီ။
ကြက်သားကို မူလအရောင်ထက် ပိုရင့်တဲ့အညိုရောင်ပြောင်းအောင်သာ ကင်ပါတယ်။
မဲတူးသွားတဲ့အထိ မကင်သင့်ပါဘူး။ မဲတူးသွားရင် ကြက်သားက မာသွားတဲ့အတွက်
စားလို့မကောင်းပါဘူး။ နောက်တစ်ကြောင်းကတော့ မဲတူးသွားတဲ့အသားတွေဟာ
ကာဘွန်အဖြစ် ပြောင်းသွားတာကြောင့် စားသုံးသူအတွက် ရေရှည်မှာ အန္တာရယ် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
(အကင်စားတဲ့သူတွေ ကင်ဆာဖြစ်လာနိုင်တာမို့ အတော်သတိထားစားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်)
ပြီးတော့ အဲဒီကြက်သားတွေကို စားသုံးသူတွေ စားနိုင်လောက်တဲ့အတုံးလေးတွေ ဖြစ်အောင်
Micro Wave ဆိုတဲ့အပူပေးခွက်ထဲထည့်ပြီး ပူနွေးအောင် ၅-မိနစ်လောက် နွေးလိုက်ပါ။
အစပ်ဖြစ်အောင် ဘာဘွန်အတုံးလေးတွေ အသင့်တင့်ယူ၊
အဲဒီအတုံးထဲကို ဘာဘွန်ဖျော်ရည် (Bourbon Chicken Sauce )
ကို တစ်ဇွန်း(1 Table Spoon)ထည့်ပါ။
ပြီးနောက် ပေါင်းစဉ်အခါတုံးက ထွက်လာတဲ့ကြက်ပေါင်းရည်
တစ်ဇွန်းခွဲ(1. 1/2 Table Spoon) ထည့်ပါ။
ငြုတ်သီးအခြောက်မှုန့် တစ်ဇွန်း(1 Tea Spoon)၊
ငြုတ်ကောင်း တစ်ဇွန်း(1 Tea Spoon)၊
ငြုတ်သီးထောင်းတစ်ဇွန်း(1 Tea Spoon)၊ထည့်ပြီး ရောမွှေလိုက်ပါ။
ငြုတ်သီးပွ(အစိမ်း )……၁-၂ တောင့်၊
ကြက်သွန်နီ ……………၁-၂ လုံး၊
မုန်လာဥနီ……………..၁-၂ လုံး ကို အစိတ်စိတ် ခွဲပြီး ရောထည့်လိုက်ပါ။
အားလုံးကို ရောမွှေပြီး အိုးတစ်အိုးထဲမှာ ပေါင်းပြီး အပူပေးလိုက်ပါ။
ဘာဘွန်ကြက်သား ဟင်းစပ်တစ်မျိုးကို ရရှိပါပြီ။
Chicken Mixed…(sauce) လုပ်နည်း...
1. Salt =1 Big Spoon………………
2. Chicken Marinade Seasoning =3 Big Spoon………………
3. Mushroom Soy Sauce =3 Big Spoon………………
4. Soy Sauce =3 ½ Cup…………………..
1. Oyster Flavored Sauce =3 Cans……………………..
2. White Cooking Wine =1 ½ Cans…………………..
3. Sugar =7 (big) Cups…………………
Labels: စားကြမယ်လေ ကောင်းကောင်း
"ဘာဘွန်ကြက်သား(Bourbon Chicken) ဟင်းစပ်တစ်မျိုး......